ကိုးကားမှီငြမ်းခြင်း (Citation and Referencing) အကြောင်း ဘာတွေသိထားဖို့ လိုအပ်မလဲ။
📑 Assignment ရေးနေတဲ့ကျောင်းသားတွေ၊ စာတမ်းပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် citation (ကိုးကားခြင်း)နဲ့ referencing (မှီငြမ်းခြင်း) ကို မဖြစ်မနေ သိထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းမွန်စွာ citation လုပ်ထားတဲ့၊ referencing လုပ်ထားတဲ့ paper တစ်ခုဟာ အမှတ်ပေးတဲ၊ စစ်ဆေးတဲ့ ဆရာတွေအတွက် impression ကောင်းစေသလို ကျောင်းသားတွေကို အဆိုးဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ plagiarism ကိုပါကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အသုံးအများဆုံး citation နဲ့ referencing တွေဖြစ်တဲ့ APA နဲ့ Harvard ပုံစံတွေကို ဆွေးနွေးပေးသွားမှာပါ။
📑 APA ဆိုတာကတော့ American Psychological Association ကို အတိုကောက်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Harvard ကတော့ ဒီနာမည်အတိုင်းပါပဲ။ ပုံစံနှစ်ခုလုံးဟာ ဆင်တူနီးပါးလောက်ရှိကြပြီး တက္ကသိုလ်အတော်များများကလည်း ပုံစံနှစ်မျိုးလုံးကို လက်ခံလေ့ရှိကြပါတယ်။
📑 Citation ဆိုတာက ကိုယ်ယူထားတဲ့ရင်းမြစ်တစ်ခုက စာကို မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်နဲ့ဖော်ပြတာ “” ဒါမှမဟုတ် အဲဒီရင်းမြစ်က စာသားကိုပဲ ကိုယ့်စာနဲ့ကိုယ်ပြန်ရေးတဲ့အခါ စာထဲမှာတစ်ခါတည်းဖော်ပြသုံးနှုန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းမြစ်ရဲ့ အပြည့်အစုံမဟုတ်ဘဲ တစ်ပိုင်းတစ်စသာ ပါပါတယ်။
❗ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင် “The best advertising is done by satisfied customers" (Philip Kotler, 2004, p.15). ဆိုတာမှာ မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်နဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့စာသားတွေဟာ တိုက်ရိုက်ကူးယူထားတဲ့ Quote တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက်က ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ဖော်ပြထားတာကတော့ အကိုးအကားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်စာနဲ့ကိုယ်ပြန်ရေးတာမဟုတ်ဘဲ ကိုးကားတဲ့စာအုပ်ထဲက အတိအကျယူသုံးတဲ့အခါမှာတော့ စာမျက်နှာနံပါတ်ပါ ထည့်ပေးစရာလိုအပ်ပြီး အတိအကျယူသုံးတဲ့စာကိုလည်း မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ် (Quote) လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
❗ ကိုယ့်စာနဲ့ကိုယ်ပြန်ရေးတာဆိုရင်တော့ မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်မလိုအပ်သလို စာမျက်နှာနံပါတ်လည်းမလိုအပ်ပါဘူး။ ဥပမာ The best advertising is done by satisfied customers (Philip Kotler, 2004).
❗Citation ယူသုံးတဲ့အခါမှာ Narrative style (စာရေးသူကိုယ်တိုင်ပြောတာကို ရည်ညွှန်းတဲ့ပုံစံဆိုရင် စာရေးသူကို ကွင်းခတ်ဖော်ပြစရာမလိုပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် Philip Kotler (2004) said that….
❗ဒီလိုcitation လုပ်တဲ့အခါမှာ စာရေးသူ သုံးယောက်ထိ အနောက်နာမည်တွေကိုသုံးကာ ဖော်ပြနိုင်ပြီး သုံးယောက်ထက်ပိုတယ်ဆိုရင်တော့ et al လို့ အသုံးပြုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ (Field, David and Smith, 2015). (Field et al, 2015).
❗Referencing လုပ်တဲ့အခါမှာ Harvard က Reference List လို့သုံးပြီး APA မှာတော့ References လို့ပဲအသုံးပြုပါတယ်။ စာတမ်း ဒါမှမဟုတ် Assignment ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာအပြည့်အစုံဖော်ပြတဲ့ အကိုးအကားဖြစ်ပါတယ်။
🗒Harvard style referencing မှာ 1. Name of the author(s) 2. Year published 3. Title 4. City published 5. Publisher 6. Pages used ဆိုပြီး ပါရပါမယ်။ Last name, First Initial. (Year published). Title. Edition. City: Publisher, Page(s).
အဲဒါတွေကို အခုဖော်ပြထားသလို စီရပါတယ်။ သတိထားရမှာက Italic (အစောင်းရေး) ထားတဲ့နေရာမှာ အစောင်းရေးရပါမယ်။ ကွင်းစကွင်းပိတ်ခတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ ကွင်းစကွင်းပိတ်ခတ်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာ ဒီလိုပါ။ Smith, D. (2014). Citing effectively. 3rd Edition. Mandalay: AIM Management, pp. 150-160.
အကိုးအကားတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါ ရေးတဲ့သူရဲ့ နောက်နာမည်ကို အက္ခရာစဉ်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်။ တကယ်လို့ စာရေးသူတစ်ယောက်တည်းဆီကနေ နှစ်အုပ်သုံးအုပ် ကိုးကားတယ်ဆိုရင်တော့ ထုတ်ဝေတဲ့ကာလအလိုက်စီပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်တွေဆိုရင် Edition ကို ထည့်စရာမလိုပါဘူး။
Webpage ကနေ ယူတာဆိုရင်တော့ Smith, D. (2014). Citing effectively. Available at: https://www.citingeffectively.com/citing123 (Accessed: 15 May 2018) ဆိုပြီးရေးသားရပါမယ်။
🗒APA Style မှာတော့ 1. Name of the author(s) 2. Publication information (Year of Publication) 3. Title 4. Information about the publication (cities or locations) 5. Publisher 6. Pages used ဆိုပြီး ပါရပါမယ်။
Last name, First Initial. (Year published). Title. Edition. City, Publisher, Page(s). ဒီနေရာမှာတော့ Title ကို Italic မသုံးဘဲ Publisher ကို italic သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Derwing, T. M., Rossiter, M. J., & Munro, M. J. (2002). Teaching native speakers to listen to foreign-accented speech. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 23(4), 245-259.
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Citation နဲ့ Referencing အကြောင်းကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် သိနိုင်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဥပမာအဖြစ်ယူပြီး စာတမ်းရေးတဲ့အခါ၊ Assignment ရေးတဲ့အခါမှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ စာစစ်သူသဘောကျမယ့် စာတမ်းတွေရေးနိုင်ကြပါပြီ။
#AIM #Management #Institute #Assignment #Dissertation #Thesis#Citation #Referencing #Mandalay